Fanadihadiana lalina momba ny Turinabol ho an'ny fanabeazana bodybuilding - Buyaas
Fandinihana lalina momba ny Turinabol ho an'ny taova
Aprily 24, 2019
1. Inona moa i Turinabol? Ahoana no iasany?
Turinabol (2446-23-3) dia steroid anabolic izay novolavolaina tamin'ny fanovana ny Dianabol. Ny steroid dia novolavola tamin'ny fampifangaroana rafitra simika roa an'ny Clostebol (4-chloretesterone) sy Dianabol. Izany no antony mahatonga ny anarana hoe chimodehydromethyltestosterone 4-chlorodehydromethyltestosterone. Ireo fiovan'ny rafi-pandehan'ny simia dia nanome ny toetra mahazatra izay mampiavaka azy amin'ny steroids hafa toy ny tsy misy aromatizable ary manana ny mari-pahaizana ambany indrindra amin'ny androgenic. Ity zava-mahadomelina ity dia manana tantara mahavariana ao ambadik'izany manazava ny fisondrotany sy ny fanjavonany eo amin'ny tsena.
Tonga tao an-tsena ny Turinabol voalohany tao 1962 taorian'ny namoahan'i Jenapharm avy any Alemana Atsinanana. Tao anatin'ny folo taona vitsivitsy, ny medikaly dia nahazo fitarihana avo lenta tsy vitan'ny lehilahy, fa amin'ny vehivavy koa sy ny ankizy ao amin'ny tontolo ara-pahasalamana. Ny Turinabol dia hita fa mahomby amin'ny fananganana ny hozatry ny foza sy ny fiarovana ny taolana fa tsy mampiseho fiantraikany mahery vaika amin'ireo mpampiasa azy. Noho ny vokatra tsara nomen'ity zava-mahadomelina ity dia betsaka ny olona atleta sy mpanao fanatanjahan-tena no mbola mihevitra an'i Turinabol ho steroid indrindra.
Na dia izany aza, tao amin'ny 1990s ny zava-mahadomelina dia nanan-danja erak'izao tontolo izao taorian'ny nampiasana tsara ny zava-mahadomelina tamin'ny atleta olympiakany ny Doping Machine East Doping. Taorian 'ny nahafantaran' i Oral Turinabol anjara toerana manan-danja teo amin 'ny manafintohina alemana Atsinanana, Jenapharm dia nanamafy ny famokarana fanafody tao 1994. Roa taona taty aoriana, ny famokarana herinaratra Pharmaceutical dia nitondra an'i Jenapharm saingy nanapa-kevitra ny orinasa fa tsy hamorona Turinabol indray, ary izany dia nanjavona tao an-tsena. Hatramin'izao, tsy misy orinasa orinasa fantatra amin'ny orinasa Oral Turinabol, ary afaka mahazo azy avy amin'ny laboratoara ambanin'ny tany na eo amin'ny tsena mainty.
Ahoana no miasa?
Tahaka ny fitsaboana anabolika hafa, Turinabol (2446-23-3) dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitehirizana sy ny proteinina ary ny fiarovana ny famokarana sela mena ao amin'ny vatanao. Ireo rehetra ireo, ireo toetra ireo dia tena ilaina amin'ny fampivoarana ny rivotra iainanao. Amin'ny ankapobeny, ny firafitry ny proteinina no singa fototra ao amin'ny fanorenana ny rantsam-batana miaraka amin'ny sentence izay tompon'andraikitra amin'ny taham-pahafatesana izay manangonan'ny sela ny proteinina amin'ny fihazonana azota mitana anjara toerana manan-danja eo amin'ny fitambaram-pofoanao.
Etsy ankilany, ireo sela mena izay tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny vatanao amin'ny oksizenina amin'ny alalan'ny ranao. Arakaraky ny habetsahan'ny ra ao amin'ny vatanao ny steadier dia ny famokarana oksizenina sy ny sakafo ho an'ny faritra samihafa amin'ny vatan'ny fanamafisana ny fihenan'ny muscle. Ireo asa rehetra ireo dia ilaina amin'ny vatanao rehefa manatsara ny fihenan-tsak'izy ireo izy ireo ary mampitombo ny fitomboan'ny tavy. Izany no antony mahatonga ireo atleta maro ho tian'ny Oral Turinabol amin'ny steroids hafa anabolic hafa.
Ankoatr'izay, Turinabol dia fantatra ihany koa amin'ny fametrahana ny Hormone Binding Globulin (SHBG) mifandray amin'ny firaisana ara-nofo izay ahafahan'ny testosterone miasa maimaim-poana ao amin'ny vatana izay mampiakatra ny vokany. Ankoatra izany, ny zava-mahadomelina dia mitazona steroids hafa mety hampiasa anao ao amin'ny vatana ary hanakana azy ireo tsy hifanaraka amin'ny SHBG. Amin'ny ankapobeny, raha toa ianao ka mibata Turinabol amin'ny steroids hafa anabolika, azonao antoka fa hahazo vokatra farafaharatsiny ianao rehefa manapaka ny SHBG - ka manome anao ny vokatra irinao amin'ny faran'ny vanim-potoana.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny Dianabol sy Turinabol, azafady lahatsoratra references: Ny Torolàlana Farany ho an'ny Dianabol ho an'ny Bodybuilding
2. Turinabol Dosage
Ny Oral Turinabol (2446-23-3) dia manana hery anabolika izay voamarina ao amin'ny 53 sy ny fiantraikany androgenic kely izay voamarika ao amin'ny 6, izany no mahatonga ny rongony ho ambony noho ny fampitahanao ny tombony sy ny vokatra hafa atolotra ho an'ireo mpampiasa azy. Noho izany, rehefa maka ity fanafody ity ianao, dia tsy dia mahatsapa ny herisetra, ny fihenan-java-maneno na ny tsilo, fa tsy midika izany fa tsy misy ny fiantraikany. Ny olona sasany dia hiaina azy miankina amin'ny fihetsiky ny vatany amin'ny steroid anabolic. Raha ampitahaina amin'ny Dianabol ray aman-dreny, Turinabol dia steroid tsy misy herin'aratra, ary ny atleta na bakteria dia mahalana no mihevitra azy io ho toy ny masira mahazo fanafody raha tsy ampiasaina amin'ny steroid hafa anabolic hafa.
Oral Turinabol dia efa ho ny antsasaky ny valin'ny testosterone anabolika ary ny dosages dia avy amin'ny 40 ka hatramin'ny 60mg isan'andro. Na izany aza, ny dokotera dia afaka manoro anao manoloana ny fijerinao ny fahasalamanao. Ho an'ny mpampiasa Turinabol mafy, ny dosages dia mety ho avo toy ny 80 na 100mgs isan'andro. Misy mpikaroka bodisma milaza fa mety hisy fiantraikany eo amin'ny zava-mahadomelina ny fiakaran'ny dipoavatra, nefa ny zavatra tsara dia ny tsy fivadihana.
Ao amin'ny tontolo ara-pahasalamana, ny Turinabol dosages dia matetika no ambany ary marary lehilahy iray no voatery handray ny 5 amin'ny 10mg isan'andro mba hahazoana ny hozatra na taolana tapaka. Amin'ny lafiny iray, ny marary vehivavy dia mandray ny dosin ambany indrindra ao Turinabol amin'ny 1mg isan'andro fotsiny ary raha tsy tokony hihoatra ny 2.5mg isan'andro ny fitomboana. Mampitombo ny toetran'ny lahy eo amin'ny vatany ny zava-mahadomelina, ka noho izany, ny mpampiasa vehivavy dia ampirisihina foana hanome dosie ambany mba hisorohana ny virilization.
Ny mpirotsaka Turinabol dia tokony handinika ihany koa ny fandehanana dosia ambany izay azo tsapaina taoriana kelin'ny nampiasana ny vatana ho fanampiny. Raha vaovao amin'ny steroids ianao, dia tsy tokony hihoatra ny 40gm amin'ity steroid ity isan'andro. Mandehana handinika ny fitsaboana ary ny dokotera dia hanome torohevitra anao araka ny tokony ho izy ary mametraka ny dosage mety Turinabol ho anao. Aza mividy ny zava-mahadomelina ary manomboka avy hatrany raha tsy misy fitsaboana ara-pahasalamana. Mety hitondra fiantraikany mahery vaika izay mety ho sarotra na sarotra ny hivadika.
3. Turinabol cycle
Ny Oral Turinabol dia amboamboarina amin'ny steroid hafa anabolic mahery noho ny fahaizany manafoana ny SHBG ary ny manakana azy tsy hifikitra amin'ny steroïde. Noho izany, manome ny testosterone ao amin'ny vatana miaraka amin'ny tontolo iainana ahafahana miasa amim-pilaminana ary manome vokatra faran'izay betsaka amin'ny mpampiasa. Araka ny efa voalaza tery aloha dia tsy heverina ho ny anabolika anabolika na anabolika indrindra i Tbol, ka noho izany dia maro ny mpampiasa no mampiasa azy io miaraka amin'ny masomboly hafa nahazo fanafody. Ny Oral Turinabol dia mampiavaka tsara ny steroid anabolic ho an'ny fampiasana mandritra ny fahavoazana matavy, ny fitazonana am-paosy ary ny fanomanana ny fambolena.
The Oral Turinabol cycles mety hampiditra ny fanafody irery miaraka amin'ny dosages manomboka amin'ny 40-60mgs isan'andro ho an'ny 6 ka hatramin'ny herinandro herinandro 8. Io dosage sy tsiranoka io dia ho ampy hanome anao ny hozatry ny fo, hampitombo ny herinao manontolo ary hihazona ny volanao. Ao amin'ny fikojakojana Tbol afaka ampiasainao dia afaka mampiasa fanafody hafa toy ny Testosterone mba hampisy fiantraikany amin'ny vokatra. Ny dokotera dia afaka manoro anao hampiditra testosterone dosage dosage amin'ny 100mg ny tsindrona orinasa Turinabol mandritra ny fe-potoan'ny herinandro 8, izany raha te hahazoana mozika mahazatra tsara ianao ary mahatsiaro ny miaraka amin'ny dosage miaraka amin'ny sakafo sy ny sakafo ara-dalàna.
Any amin'ny cycles de testosteron ela kokoa toy ny rehefa mampiasa testosterone Enanthate izay mandeha mandritra ny herinandro 12, dia tsy maintsy hampiditra Oral Turinabol fotsiny ianao amin'ny voalohany 4 hatramin'ny herinandro 6. Raha toa ka mampahafantatra ny dokotanao ao anatin'ny fotoana fohy dia azo atao ny mampihena ny dosage na manome vahaolana hafa vao miharatsy.
4. Ny vokatra Turinabol
Toy ny steroids hafa, Oral Turinabol (2446-23-3) dia manome voka-pandrefesana vokatry ny fomba ampiasanao azy ary inona no ilainao hahatratrarana azy. Ny olona sasany dia nanana ny traikefa ratsy indrindra tamin'ity steroid ity raha toa ny olon-tiany tiany kokoa noho i Turinabol amin'ny steroid hafa. Nandritra ny taona maro dia nampiasaina tamin'ny endriny samihafa ity steroide anabolika ity na tsia. Hatramin'izao, ity zava-mahadomelina ity dia mbola iray amin'ireo steroïde ampiasaina indrindra amin'ny tsingerim-bolo sy ny famokarana. Ireto ny sasany amin'ireo vokatra tsara azonao andrasana amin'ity steroid ity;
a) Ampitomboina ny tanjaka
Ny ankamaroan'ny mpisera Oral Turinabol dia nahitana ny bakteria, ny bisikileta, ary ny atleta dia nitatitra fa mihamitombo ny tanjaka izay ahafahan'izy ireo miasa mandritra ny ora maro ary mifaninana amin'ny fomba mahomby. Ny antony mahatonga ireo atleta maro tsy mahatratra ny tanjon'izy ireo dia ny tsy fahampian'ny tanjaka ampy hahazoana azy ireo amin'ny fampiofanana sy amin'ny fifaninanana ihany koa. Na izany aza, raha mampiasa Turinabol araka ny tokony ho izy ianao, dia azonao antoka fa hahazo hery bebe kokoa ary hahatratra ny tanjon'ny asa ho anao.
Na izany aza, aza manoatra noho ny fanantenana hahazo hery bebe kokoa; Ny dokotera omen'ny dokotera anao dia ampy hanome ny vokatra tianao. Ny fiterahana dia hampitombo ny vintana amin'ny fahatsapana ny vokatra mahatsiravina. Azonao atao koa ny misintona ity steroid ity, miaraka amin'ny Injectables hafa matanjaka kokoa, mba hahitana vokatra tsara kokoa.
b) Ampitomboy ny lanjan'ny muscle
Raha mpikaroka bodybuilder mikaroka fanafody izay hanampy amin'ny fanorenana ny hozatra ianao, dia afaka mandeha mankany Oral Turinabol. Ny fanafody ny dosia tsara sy ny fikolokoloana, ny fanafody dia mamela ny hozatry ny foza amin'ny faran'ny vanim-potoanao. Mampitombo ny rà mena ao amin'ny vatanao ilay fanafody, izay midika ho amin'ny fikarakarana ny sakafo sy ny oksizenina amin'ny vatanao, ary mahatonga ny fitomboan'ny haza. Etsy ankilany, ny fitsaboana dia manampy amin'ny fantsom-batana haingana toy izany koa aorian'ny fampiofanana mafy. Tadidio koa ny manaraka ny dosage amin'ny sakafo mahazatra ary mampiditra ny dokotera amin'ny dingana manontolo.
Ampahafantaro ny dokotera momba ny fomba fiainanao aorian'ny fiatoana voalohany. Avelao koa ny dokotera hanampy anao hisafidy ny fametrahana ny fanampianao farany amin'ny fianarana mifanaraka amin'ny vokatra tadiavinao. Tokony ho fantatry ny mpitaiza anao sy ny mpampiofana fa ampiasainao ny steroid mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Afaka manantena hahazo tombony momba ny 10lbs ianao amin'ny faran'ny vanim-potoanao. Ny halavan'ny tosi-tsakafo Turinabol sy ny dosage dia hilalao ihany koa ny anjara andraikitra manan-danja amin'ny famaritana ny habetsaky ny hozatry ny leo mba hahazoana vokatra hafa nomena an'io zava-mahadomelina io.
Turinabol dia iray amin'ireo mpanafaingam-bola tsara indrindra ary maro amin'ireo atleta sy bodybuilder no tia azy rehefa maniry ny hisorohana ny fetin'ny vatana. Ny fanafody dia hiaro anao amin'ny fihenan'ny voan'ny muscle, ary hiaina harefo koa ianao. Ny ilainao eto dia ny manapaka ny vatana fanampiny fanampiny izay mandà anao ny hozatry ny fo sy ny fijery tianao hananana biriky. Na izany aza, tsy misy fepetra azonao hamaritana ny habetsaky ny harefo amin'ny hozahanao aorian'izany steroid. Na izany aza, mbola i Turinabol ihany no safidy tsara indrindra ho an'ny mpanao biriky sy atleta maro. Azonao ampiasaina ihany koa Turinabol na dia tsy atleta aza ianao mba handrotsahana ny tavy be loatra na hijery ny lanjanao.
Ho an'ny vehivavy dia ahazoanao antoka fa maka ambany dosim-barotra ho anao ianao mba hahazoana vokatra farafaharatsiny, ary tsy hivoatra amin'ny fiantraikany mafy amin'ny tsindrin-tsakafo Turinabol. Mitandrema amin'ny dosia ambany omen'ny dokotera anao. Na dia izany aza dia mety misy vehivavy sasany mila dika kely kokoa mba hahazoana vokatra tadiavina, saingy avelao ny dokotera manao ny fanitsiana tsingerina sy ny dosage.
d) Hamafisina ny fihazonana ny nitroka
Ity zava-mahadomelina ity koa dia iray amin'ireo steroidia vitsivitsy izay afaka manatsara ny fihazonana azota amin'ny hozatrao. Tena ilaina ny nitroka ho fiarovana ny fiarovana sy ny fitombon'ny muscle. Noho izany, rehefa mampiasa io zava-mahadomelina io ianao, dia azonao antoka fa mahazo ny hozatra tsara ianao. Mandritra ny tsingerina famaranana, ny azota dia miantoka fa tsy mamoy ny fihinan'ny voanjo miaraka amin'ny tavy ny vatana. Amin'ny maha-atleta anao, ny ilainao rehetra dia ny hozatra tsara sy ny tsy matavy, ary izany no mahatonga an'i Turinabol ho fanampim-panazavana lehibe amin'ny tontolo manerantany. Ny Injectables sasany dia tsy mamela ny fitehirizana ny azota amin'ny hozany ary azo atao tsara ny manaraka fitsaboana tahaka izany amin'ny dosina Turinabol.
Ny Turinabol mahavariana dia mety hitondra fiantraikany mahery vaika. Indraindray, na dia maka ambany aza ianao, dia mbola afaka mahatsapa ny vokany ianao satria sarotra ny vatanao. Izany no mahatonga ny fitsaboana ara-pahasalamana foana, alohan'ny hanombohana mampiasa steroid anabolic. Maro amin'ireo atleta na mpanao fomban-drazana no entin'ny faneren'ny mpiara-mianatra sy mividy zava-mahadomelina satria mampiasa azy ireo ny mpiara-miasa aminy. Ny fihanaky ny aretina dia samy hafa amin'ny olona; Turinabol dia mety hiasa ho anao saingy tsy mahazo tombony amin'ny namanao na dia mampiasa dòz mitovy aza. Ireto misy ny sasany amin'ireo vokatry Turinabol mahazatra;
Ny tsimokaretina Turinabol dia tsy manana fiantraikany amin'ny endriona hafa noho izy tsy mahalavorary, tsy misy fiantraikany amin'ny progestin toy ny gynecomastia ary tokony hohadinoinao koa ny fisotroana tafahoatra rehefa mampiasa io fanafody io. Izany dia mahatonga an'i Turinabol ho an'ny steroid tena tsara ho an'ireo izay te hisoroka ny tosidra avo lenta izay vokatry ny fampiasana steroid.
Ny orinasa Oral Turinabol dia tsy mampiseho marika amin'ny fananana androgenic effects izay azo alefa amin'ny vatanao. Na izany aza, satria ny orinasa dia tsy namorona orinasa mpanamboatra fanafody ary tsy misy afa-tsy ao amin'ny laboratoara ambanin'ny tany, sarotra ny manamarina raha mety hampiharihary anao amin'ny androgenic effects izany na tsia. Ny sasany amin'ireo mpampiasa dia mitaraina noho ny fahatsapany ny fiantraikany androgenic kely, toy ny fihenan'ny volo, akne, ary ny baldness lahy. Ny vatan'olombelona dia miavaka, ary raha sendra mahita fa misy vokany tsy mahazatra dia mifandraisa avy hatrany amin'ny dokotera aminao.
Ao amin'ny vehivavy, ny fiantraikan'i Turinabol dia hita kokoa noho ny amin'ny lehilahy toy ny virilization izay ahitana; ny fanamafisana ny feo, ny fampitomboan'ny klitoraly, ary ny fitomboan'ny volo eo amin'ny vatana manontolo. Ny voka-dratsiny koa dia azo fehezina raha atsahatra ny tsingerinao alohan'ny hivoatra ny toe-javatra. Raha tsy miraharaha ny vokany ianao, dia mety ho sarotra aminy ny hanery anao hanohy ny androm-piainanao amin'ny toetran'ny lehilahy izay tsy misy vehivavy manonofinofy velively.
Ny Oral Turinabol dia misy fiantraikany manan-danja amin'ny fitomboan'ny LDL izay lazaina hoe cholesterol malemy ary mampidina ny HC izay tsara kolesterol. Ireo kalitao goavam-be ireo dia mety hampidi-doza ary mety hitondra aretina avy amin'ny fo. Noho izany, raha manana cholesterol avo be ianao, dia tokony hihevitra anao hiala amin'ny steroid. Na izany aza, rehefa ampiasaina izany dia ahafahanao manao asa be dia be ary mihinana sakafo manankarena ao amin'ny asetra fetsy. Ho tsara hevitra koa ny fanaovana sakafo be dia be.
Ity tsindrona ity dia manimba ny famokarana testosterone voajanahary raha tsy raisinao izany miaraka amin'ny testosteron exogenous. Na izany aza, aorian'ny famitana ny fitsaboana dosage, ny vatanao dia hanohy hamokatra hormone testosterone na dia kely aza raha tsy misy ny testosteron exogenous ao amin'ny dosage anao. Ny haavon'ny testosterone ambany dia mety hitarika amin'ny soritr'aretina toy ny olana ara-batana, ara-pananahana ary indraindray ara-tsaina. Noho izany dia tsara ny mankany amin'ny Post Cycle Therapy (PCT) taorian'ny nahavitany ny tsingerin'ny Oral Turinabol.
Ny ankamaroan'ny steroides ao am-bohoka, Turinabol dia mety misy poizina amin'ny aty aminao, ary tokony hiantoka ny hiarahanao amin'ny tsingerinao miaraka amin'ny vokatra azo avy amin'ny famokarana sikile. Miresaha amin'ny dokotera ary izy no hanome ny fanampiana tsara indrindra hanaraka ny dosage steroid. Na izany aza dia azonao atao koa ny misoroka ity olana ity amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana ambany sy ny fitsaboana ara-pahasalamana matetika ary aorian'ny famitana ny tsingerina
5. Turinabol ny antsasaky ny fiainana
Ny Oral Turinabol dia iray amin'ireo steroids médicamente tsara indrindra amin'ny halatr'omby. Ny fanafody dia manana ny antsasaky ny ora 16 ao amin'ny vatanao ary noho izany dia mila entina indray mandeha isan'andro ianao. Tsy misy antony tokony hizarana ny dosage ho roa na telo, ary ny ankamaroan'ny dokotera dia hanoro hevitra anao ihany koa haka izany indray mandeha isan'andro. Ny ankamaroan'ity mpampiasa steroid ity dia tia maka ny dosin Turinabol ho fanampim-panafahana amin'ny fiofanana mba hanomezana azy ireo hery entina hampiofanana azy ireo bebe kokoa amin'ny mpikaroka. Ny mpampiasa hafa dia toy ny fitsaboana dosage amin'ny sakafo voalohany amin'ny sakafo voalohany rehefa mifoha izy ireo. Na izany aza, ny dokotera dia hanoro anao amin'ny dosia mety sy ny fotoana mety haka azy ho anao mba hahatratrarana ny vokatra tadiavinao amin'ny faran'ny vanim-potoana.
Etsy ankilan'izany, tsy misy olona azo antoka hoe haharitra hafiriana ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatanao aorian'ny famaranana ny tsingerinao Turinabol. Ny fitsapan-kevitra sasany dia milaza fa mety hanjavona ao amin'ny vatanao ilay fitsaboana tanteraka aorian'ny volana 12 raha ny mpivarotra hafa kosa milaza fa herinandro vitsivitsy monja alohan'ny hidirany amin'ny vatanao. Raha izany, dia mikasa ny hampiasa Turinabol ianao ary handray anjara amin'ny fifaninanana manaraka izay tsy mamela ny fampiasana steroïde, ataovy azo antoka fa mifantoka amin'ny dokotera ianao. Ny fianarana ara-pahasalamana dia tena ilaina ihany koa aorian'ny famitana ny tsingerina ary koa mitady fitsaboana hafa izay mety hanampy amin'ny fitsaboana ao amin'ny vatanao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
6. Turinabol amin'ny famoahana
Ny famokarana cycles dia manan-danja ho an'ny mpampiasa steroid rehetra satria manampy anao ny manaisotra ny fetin'ny vatana izay mandà anao ny hozatra ilainao. Ny Turinabol dia manatsara ny famokarana fanampiny satria manatsara ny fihazonana azota ao amin'ny vatanao izy io amin'ny fiarovana azy ireo amin'ny fahaverezana amin'ny vatana. Ny fanampiana dia hanampy anao koa ny hozatra mafy sy ny hatsikana hozatra rehefa miezaka ny ho very ny fatin'ny fery. Ny vatana dia manify manodidina ny hozatra, atsangano izy ireo tsy ho hita sy henjana na dia mihamitombo aza. Noho izany dia tsy maintsy ho an'ny mpandidy bodybuilder na atleta matihanina ny fizotran'ny famokarana.
Turinabol (2446-23-3) ho an'ny famonoana koa dia azo ampiasaina miaraka amin'ny steroïde hafa mandoitra izay manampy koa amin'ny fanesorana ny fatran'ny fatotra. Eto, ny fiasan-tsakafo sy ny sakafo ara-dalàna dia hanana anjara toerana ilaina amin'ny dingana manontolo amin'ny fanesorana ny tavy be loatra. Ny famokarana sikilika dia arahin'ny tsingerim-bolana izay indraindray manome fatina bebe kokoa ao amin'ny vatanao. Miresaha amin'ny dokotera momba ny fomba tsara indrindra amin'ny fitsaboana an'io zava-mahadomelina io raha te hanapaka kely ianao.
7. Turinabol ho an'ny bulking
Ny Oral Turinabol dia tsy fampihomehezana amin'ny endri-tsolika malaza, fa rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy miaraka amin'ny steroids hafa marefo kokoa dia manome vokatra tsara. Ny steroid dia hanampy anao hahazo pounds sy hatsarana tsara amin'ny faran'ny vanim-potoanao. Na izany aza, ny anjara andraikitra manan-danja eo amin'ny famaranana dia ny fampiharana sy ny sakafo ara-dalàna. Ny fampiasana Turinabol miaraka amin'ny steroïde mahery dia mety ho hevitra tsara satria io tsiro steroida io dia mampihena ny fahaiza-manaony raha SHBG izay mahatonga azy mafy ho an'ny steroids miasa amin'ny fomba malalaka ao amin'ny vatanao.
Noho izany, ny orinasa Turinabol dia hiantoka fa ny steroids hafa dia mahomby ho an'ny vokatra tsaratsara kokoa. Na izany aza, rehefa ampiasaina irery ny orana Turinabol dia afaka manampy koa ny hozatra sasany fa tsy amin'ny habetsahan'ny ilan'ny bodybuilders elit. Amin'ny ankapobeny, ny atleta maro dia mihevitra ny mampiasa steroids oral miaraka amin'ny fanampiana mahery vaika mba hanampiana azy ireo hahatratra ny tanjony ao anatin'ny fotoana fohy. Eto, ny dokotera no ho olona tsara indrindra hitarika anao amin'ny fahazoana ny fitsaboana tsara indrindra izay mety hampisy vokatra tsara rehefa ampiasaina amin'ny orinasa Turinabol.
Ny vokatra hafa iray Anavar hafa koa dia nalaza noho ny fisakanana sy ny bulking, noho ny antsipiriany bebe kokoa, azafady ny lahatsoratra momba ny lahatsoratra: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba Anavar (Oxandrolone) ho an'ny bodybuilding
8. Torolàlana Turinabol
Oral Turinabol dia malaza noho ny valiny omeny ary koa ny tombontsoa ho an'ireo mpampiasa steroid. Ireto misy sasantsasany manan-danja Torolàlana Turinabol;
Ny halavan'ny androm-piainany -hafainganina amin'ny steroides hafa, ny Turinabol dia anisan'ireo zava-mahadomelina vitsivitsy miaraka amin'ny antsasaky ny androm-piainan'ny 16 ora. Ny steroids hafa ao amin'ny oral dia tsy maintsy entinao ny dosages toy ny 2 na 3 in-droa isan'andro raha tsy mampiasa Turinabol ianao. Ianao irery no mila mitondra ny doka indray mandeha isan'andro, ary tsara ny mandeha.
Mampitombo ny fahabetsahan'ny hozatra sy ny tanjaky ny vatany - ny mpampiasa Turinabol mare dia milaza fa afaka mahazo ny hozatry ny leoparda izy ireo ary na dia aorian'ny fikolokoloana ny cybercircles aza dia mitombo hatrany ny hozatra. Maro ihany koa ireo mpisera mpampita dia mitatitra ny fitomboan'ny hery ao amin'ny vatana izay manampy azy ireo hiasa mandritra ny ora maro ary hahazo ny vokatra tadiavina haingana.
Tsy misy injections - ho an'ireo izay tsy mahazo aina amin'ny steroïd ao anaty, dia afaka manao safidy tsara i Turinabol. Izany dia fanafody am-bava ary manana halaviran-dava lava, maro ireo olona mahita azy io mora sy mora ampiasaina satria ianao dia mila mandray dose iray isan'andro. Ny valiny dia hita miharihary bebe kokoa koa rehefa miaraka amin'ny dòzo miaraka amin'ny sakafo sy ny fiatoana araka ny tokony ho izy.
Azo afindra amin'ny steroids anabolika samihafa - izay mahagaga ny maro mpampiasa Turinabol dia ny fahaizany miasa miaraka amin'ny steroids samihafa samihafa ho an'ireo mpanafaingana. Ho an'ny fandrindrana sy ny famokarana cycles dia azonao atao ny mampiaraka Turinabol miaraka amin'ny fanampiana an-tsokosoko hafa mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Ampidiro ny dokotera mba hahafahany mamolavola ny tsingerina tsara indrindra ary arakaraky ny vokatra tadiavinao.
Azo ampiasaina amin'ny lahy sy ny vavy - ny lahy samy lahy na vavy samy vavy dia afaka mandray soa avy amin'ny fampiasana Turinabol. Na izany aza, ny vehivavy dia aleo amin'ny fampiasana dosia ambany mba hisorohana ny viriosy, saingy azonao antoka fa mahazo ny hery enti-matanjaka sy ny hatsarana sy ny hozatra mafy. Ny mpandidy dia tokony hanomboka amin'ny dosia ambany izay azo ampifanarahana rehefa mandroso mankany amin'ny faran'ny vanim-potoana manaraka. Mety hampidi-doza kokoa ny fahasalamanao ary mety hampisy fiantraikany mahery vaika kokoa ny fampiasana dosage mihoatra ny torohevitra.
Ny fampiasana fitsaboana - avy any Turinabol izay tena ilaina amin'ny tontolo manerantany, ny zava-mahadomelina dia mahatalanjona eo amin'ny sehatry ny fitsaboana. Maro ny marary mijaly vokatry ny aretina vokatry ny fitsaboana, afaka mampiasa Turinabol mba hanampy azy ireo hahazo sy hihazona ny taolany sy ny fahasalamany. Ny sasany amin'ireo mpampiasa Turinabol dia mety tsy ho fantatry ny marary fa mpampiasa steroid izy ireo, fa manome vokatra tsara kosa izy.
9. Turinabol fanamarinana
Oral Turinabol dia nahazo fanangona fanadihadiana avy amin'ny mpampiasa, saingy mbola iray amin'ireo sanda mahery indrindra amin'ny steroids amin'ny tsena. Na izany aza, dia ara-dalàna kokoa izany any amin'ny tontolo ara-pahasalamana izay maneho fihetsika isan-karazany amin'ny olon-kafa. Ny sasany dia mankafy ny ampahany tsara amin'ny zava-mahadomelina ampiasainy, fa ny hafa kosa mety hampiasa zava-mahadomelina mitovy ary manana traikefa ratsy indrindra. Toy izany koa ny ankamaroan'ny steroids, anisan'izany ny orinasa Turinabol. Ohatra, ny mpanao biriky sy ny atleta elit dia nanome ity fitsaboana ity fanantenana tsara ary koa ny isa tsara indrindra taorian'ny nanampiany azy ireo hahatratra ny tanjon'izy ireo.
Ireo atleta dia midera ny zava-mahadomelina koa mba hahafahan'izy ireo manangana ny hozatry ny faniriana ary hanatsara ny herin'ny vatany izay vokatr'izany vokatra tsara izany. Amin'ny faribolan-tsikafona, ny Turinabol dia lazaina fa ilaina kokoa amin'ny fiarovana ny hozatra amin'ny fikarakarana ny vatana. Amin'ny lafiny iray, ireo mpampiasa hafa dia midera ny zava-mahadomelina ho fanampiana azy ireo hiaina vokatra feno amin'ny steroids injectable izay nokolokoloin'i Turinabol hatramin'ny nanakanana ny SHBG tsy hifanaraka amin'ny kanseran'ny ati-doha.
Ao amin'ny tontolo ara-pahasalamana, marobe ny marary no faly satria Turinabol dia nanampy be dia be ho an'ireo izay voan'ny aretim-po sy ny taolana. Ny zava-mahadomelina dia mitazona ny hozatry ny hozatra ary manampy azy ireo hivoatra, ary hampihena ny vokatry ny aretina ao amin'ny vatana. Na dia izany aza dia misy ny isan-jaton'ireo mpampiasa no mitaraina noho ny fananana traikefa ratsy amin'ny Turinabol - tatitra sasany mahatsapa ny fihenam-bidy, fihenan'ny volo ary ny hafa (fitomboan'ny vehivavy) ny fiantraikan'ny lehilahy. Tsy mitovy ny vatan'olombelona, ​​fa ny ankamaroan'ireo voan'ny tsimok'aretina ao Turinabol dia azo fehezina amin'ny fampiasana dosage tsara ary mampahafantatra ny dokotera avy hatrany ny fanandramanao amin'ny iray amin'ireo voalaza etsy ambany.
10. Turinabol for sale
Indraindray ianao dia mety manana olana sasany rehefa te hividy Turinabol amin'ny ankapobeny na ampy fotsiny ho an'ny dosage satria tsy misy orinasa fanta-daza fantatra amin'ny famokarana azy hatramin'ny 1996. Na izany aza, ny hany safidy azonao ankehitriny dia ny mividy Turinabol amin'ny alalan'ny mpamatsy maro samihafa. Ataovy tsara ny fikarohanao mba hahazoana antoka fa hahazo ny zava-mahadomelina avy amin'ny mpamokatra Turinabol azo antoka ianao. Afaka mahazo ny zava-mahadomelina avy amin'ny laboratoara ambanin'ny tany na tsena mainty ianao, saingy tsy ho azonao antoka ny kalitaony.
Alohan'ny hametrahana ny baiko amin'ny sehatra varotra an-tserasera, dia azonao aloha ny fomba ambaran'ny lalàn'ny fanjakana momba ny fividianana, fanondranana na fananana steroïde anabolic. Ohatra, any Etazonia dia tsy ara-dalàna ny mividy na mahazo ny steroid anabolika tsy misy dokotera dokotera ampiasaina amin'ny fitsaboana. Tsia, ny mpampita vaovao Turinabol dia te-hametraka ny mpanjifany amin'ny lalambe miaraka amin'ny governemantany. Ianao dia afaka Buy Turinabol Powder, na tablety eo amin'ny sehatra misy antsika, fa alohan'ny dokotera aloha, manao fanatanjahan-tena amin'ny fotoana isika, ary ny vokatray dia avo lenta. Noho izany, ho azonao antoka ny fananana Turinabol tena tsara.
11. Turinabol amin'ny fambolena - Summary
Matetika i Turinabol dia fitaovana goavana amin'ny fanabeazana biriky ary nanampy atleta maro hahatratra ny tanjon'izy ireo. Ny zava-mahadomelina dia voaporofo fa mahomby amin'ny famonoana sy ny famoahana ny cycles. Mampirisika ny fitomboan'ny hozatra sy ny tanjaky ny vatan'ny olona rehetra i Turinabol, ary manatsara ny fanamafisana ny sela amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny famokarana sela mena. Azonao atao koa ny misintona Turinabol miaraka amin'ny steroid hafa mahery kokoa ho an'ny vokatra tsara kokoa. Ny antsasak'i Turinabol dia mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny famoahana ny dosage satria tsy maintsy ilainao indray mandeha indray mandeha isan'andro.
Ao anatin'ny famoahana famaranana, Torolalana Turinabol dia hita fa manandratra ny fitehirizana ny azota izay miaro ny hozatrao amin'ny alahelonao sy ny fandaniana. Ny fiasan'ny intense dia fantatra amin'ny fitazonana ny hozatra izay indraindray mety hampijaly, fa ity fanafody ity dia manampy amin'ny fanatsarana ny fizotran'ny fanasitranana. Ny hifikitra amin'ny dosia mety, ny dokotera, ny mpanazatra ary ny sakafo ara-tsakafo dia fomba tsara indrindra hahitana ny Turinabol (2446-23-3). Raha sendra misy fiovana tsy mendrika ianao rehefa mandray ny dosage dia alao amin'ny dokotera ny fotoana fohy indrindra.
Roberts, A. (2016). Nanazava i Oral Turinabol. A + A.
Chester, N. (2014). Anabolic agents. In Drugs in Sport(p. 79-99). Routledge.
Cho, SH, Park, HJ, Lee, JH, Do, JA, Heo, S., Jo, JH, & Cho, S. (2015). Famaritana ny fitsaboana amin'ny steroid anabolic-androgenic amin'ny fanafody notontosain'ny UHPLC-MS / MS. Gazety momba ny famakafakana sy ny biomedical, 111, 138-146.
Ny Hengfei Biological, hita ao amin'ny 2008, dia orinasa haingam-panafody avo lenta teknika ho an'ny fampidirana ny famokarana, F & F sy ny varotra.
Ny torolàlana farany amin'ny lisitry ny sodium Liothyronine / T3 ho an'ny fananganana vatana
Ny toro-làlana farany amin'ny Trestolone Acetate (MENT) ho an'ny fananganana vatana
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Tadalafil
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny pregabalin